Gacan ka hadal dhex maray ergadii dooran laheyd kursi ka mid ah Aqalka hoose ee baarlamanka Soomaaliya – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Gacan ka hadal dhex maray ergadii dooran laheyd kursi ka mid ah Aqalka hoose ee baarlamanka Soomaaliya
War goordhaw nasoo gaaray ayaa sheegaya in ergo kasoo jeeda deegaanada Somaliland oo maanta lagu waday inay doortaan kursi ka mid ah kuraasta Aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya uu gacan ka hadal dhex maray.
Ergadaasi oo maanta lagu xareeyay xarunta gaadiidka booliska ee magaalada Muqdisho ayaa intii aysan bilaaban doorashada muran dhex maray, waxayna taasi keentay in ergadaasi uu gacan ka hadal dhex maro.
Waxaa kursiga gacan ka hadalka maanta dhaliyay ku tartamaayay musharaxiinta kala ah:-
1- Khadro Axmed Ibraahim
2- Guuleed Ceydurus Cige
3- Canab Xasan Kaahin
4- Shukri Cabdi Yuusuf
Dhinaca kale, ciidamada booliska dowladda federaalka Soomaaliya oo ku sugnaa goobta uu gacan ka hadalka ka dhacday ayaa la sheegayaa in markii dambe ay kala dhex galeen ergada isku feertay halkaasi, waxaana hakad la geliyay doorashadii socotay.
Khadra Axmed Ibraahim oo ka mid ah musharixiinta ku tartameysa kursigaasi ayaa lagu eedeeyay in ergo iyada taageersan ay qaska abuureen, iyadoona ay kursiga kula tartameeysay seddax musharax kale.
Illaa 15 xubnood oo ka mid ah ergadii taageersaneyd Khadra ayaa dibadda looga saaray goobta doorashada ka socotay, waxaana haatan la sheegaya in xaaladda goobtaasi ka dejiyay, islamarkaana uu guddiga doorashada go’aan ka gaari doonno xaaladda kursigaasi oo weli la isku haysto.